Hair Color Chemistry: Ahoana ny fomba fananganana volon-koditra
Haircoloring: Bleaching & Dyeing
Ny lokon'ny volo dia resaka momba ny simia! Ny loko volon'ny fiarovana voalohany dia noforonina tamin'ny taona 1909 avy amin'ny mpahay simia Frantsay Eugene Schuller, nampiasa ny paraphenylenediamine. Ny fananganana volon'ny haingon dia malaza amin'izao fotoana izao, ary mihoatra ny 75% ny vehivavy no manamboatra ny volony ary mitombo ny isan-jaton'ireo lehilahy manaraka. Ahoana no fiasan'ny volon-doha? Izany dia vokatry ny fanehoan-kevitra momba ny simika misy ny molekiola ao amin'ny volo, pigment, ary ny peroxide sy ny amniaka.
Inona no atao hoe volo?
Ny haavo dia ny keratin, ny proteinina iray hita ao amin'ny hoditra sy ny rantsan-tànana. Ny loko voajanahary amin'ny volo dia miankina amin'ny habeny sy ny habetsan'ny proteinina roa, eumelanin, ary phaeomelanin. Eumelanin no tompon'antoka amin'ny volom-bolo amin'ny volom-bolo mainty ary ny phaeomelanin dia tompon'andraikitra amin'ny blondy volamena, ginger sy loko mena. Ny tsy fisian'ny karazana melanine dia miteraka volo fotsy.
Ny olona dia nanoroka ny volony nandritra ny an'arivony taona nampiasa zavamaniry sy mineraly. Ny sasany amin'ireo mpitsabo voajanahary ireo dia ahitana pigment (ohatra: henna, akorandriaka matevina) ary ny hafa dia misy ny fantsona voajanahary na miteraka fihetsika izay manova ny lokon'ny volo (ohatra, vinaingitra). Ny pigment voajanahary amin'ny ankapobeny dia miasa amin'ny famenoana ny volo amin'ny lokony. Ny loko voajanahary sasany dia lasa amin'ny shampoos maromaro, saingy tsy voatery ho masiaka na malemy kokoa noho ny famolavolana maoderina. Sarotra ny maka valiny tsy tapaka amin'ny fampiasana ny lokon'antony voajanahary, ary ny olona sasany dia tsy mahazaka firy amin'ny fitaovana.
Ny loko volom-bolo maharitra na semi-permanent dia mety handefa ranon- javona mipetaka eo ivelan'ny volo, na mety misy molekiolan'ny pigment kely izay afaka mitsambikina ao anaty volo, amin'ny fampiasana peroxide kely na tsy misy mihitsy. Amin'ny toe-javatra sasany, dia misy molekiola maromaro maromaro miditra ao amin'ny volo mba hamorona zavatra sarotra ao anaty volo.
Ny shampooing dia hivoaka ny loko volom-bolo mandritra ny fotoana fohy. Ireo vokatra ireo dia tsy misy amoniaka, izay midika fa tsy misokatra ny valala rehefa vita ny asa ary ny lokon'ny lokon'olon-tokana dia voatazona rehefa tapitra ny vokatra.
Ny fomba fampihetseham-behivavy
Ny bleach dia ampiasaina hanamaivanana ny volo. Ny rivotra dia mamaly amin'ny melanine ao amin'ny volo, manala ny loko amin'ny fihetsiketsehana simika tsy azo ovaina. Ny molaly dia manivana ny molekiolan'ny melanin. Mbola misy ny melanine, saingy ny molekiolan'ny oxidized dia tsy misy loko. Na izany aza, ny volom-bolo dia marefo amin'ny loko mavo malefaka. Ny loko mavo dia ny loko voajanahary amin'ny keratin, ny proteinina amin'ny volo. Ny bleach ihany koa dia mamaly mora kokoa amin'ny pigment mainty eumelanin toy ny amin'ny phaeomelanin, noho izany ny loko volamena na mena dia mety hijanona aorian'ny fanazavana. Ny peroxyde hydrogène dia iray amin'ireo mpanafatra fanairana mahazatra indrindra. Ny peroxide dia ampiasaina amin'ny vahaolana alkaline, izay manokatra ny volo volo mba ahafahan'ny peroxide hihetsika amin'ny melanine.
Ny rindrina ivelany amin'ny volo, ny hodiny, dia tokony hosokafana mialoha ny loko maharitra dia azo apetraka ao anaty volo. Raha vantany vao misokatra ny hoditra dia mamaly ny loko eo amin'ny ampahany ao amin'ny volo, ny cortex, hametraka na hanala ny loko.
Ny loko marevaka matetika dia mampiasa dingana roa dingana (matetika mitranga matetika) izay manala ny loko tany am-piandohana ary mametraka loko vaovao. Mazava ho azy fa ny dingana mitovy amin'ny fanamafisana, raha tsy hoe ny loko matevina dia atambatra amin'ny volo eo amin'ny volo. Ammonia no lasibatra manasitrana izay manokatra ny hodiny ary mamela ny lokon'ny volo mba hidirana amin'ny volo-kodin'ny volony. Izy io koa dia miasa toy ny kisarisary rehefa miaraka amin'ny perioxide ny loko maharitra. Ny peroxide dia ampiasaina ho mpamorona na fanodinana oksidio . Ny mpandrindra dia manala ny loko efa misy. Ny peroxide dia mamotika ny fatorana amin'ny volo, mamoaka solifara, izay mahatonga ny lokon'ny haingon-tarehy. Rehefa miala tsy misy alikaola ny melanin, ny loko vaovao maharitra dia mifamatotra amin'ny cortex volo. Misy karazana fisotroan-dronono sy fitondran-tena samihafa koa ao amin'ny loko volon-doha.
Ny kapaoty dia manidy ny kisendrasera aorian'ny fanangonam-bokatra mba hamehy sy hiarovana ny loko vaovao.
Inona no atao hoe Century Centres?
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny dipoavatra miloko matevina sy tokana
Nahoana no voajanahary ny urine? Fa maninona no mavesatra Brown?
Inona no tokony hataonao raha asaina mandrehitra gazy ianao
Famintinana sy fanipi-pahaizana momba ny fanavakavahana - amin'ny fanazavana
10 Sakafo mahasalama voajanahary
Mandra-paharitra ela ve ny famonoana faty?
Ny Blaschko's Lines and Invisible Stripes amin'ny hoditra
Moa ve Mandainga ny Rano?
Mihinana vonona Apple na Cherry Pits
Fomba 6 hanatsarana ny sainam-pandrefesana
University of Bucknell Admissions
Documento que se pedían para aplicar por DACA
Tokony hampahafantarinao ny tsy fisian'ny atheisme amin'ny fianakaviana, ray aman-dreny?
Ny fahafatesan'i Marc-Vivien Foe
Famerenana tsy kanônika ny tantaran'i Troy
Ahoana no fiasan'ny tondradrano sy ny onja?
Ahoana ny fomba hifanerena "manazava" (manazava) amin'ny teny frantsay
Mitandrema ary manasitrana
All about Styles of Paintings
Famoahana ny ora amin'ny Sinoa sinoa mandarina
Ny fiainana sy ny lova navelan'i Otto Von Bismarck, ilay Chancellor an'ny Iron
Mpitarika ao Afovoany-Atsinanana: A Photo Gallery
Karazana kafe atolotra any Italia
Sary nalaina mialoha ny horonan-tsary sy ny profesora
Sikh Baby anarana manomboka amin'ny V
Inona no atao hoe software engineering?
Ny efitrano fianarana ho toy ny toerana tsara indrindra
Ahoana ny fametrahana "Briller" (mamirapiratra)
Fampahafantarana an'i George Eliot: Ny fiainany sy ny asany